Ahoana no fomba ahafahako manitsy backlinks ao amin'ny tranonkalako mba hahatsapa ho voaro?
Ny zavatra rehetra tokony hahatsiaro ho voaro dia ny fanaraha-maso ny rindran-damina ary manala ny ratsy amin'ny fotoana fohy. Amin'ny ankapobeny, mampiasa ny Open Site Explorer an'i Moz sy ny mpandahateny Semalt aho amin'ny fanamarinana indroa. Saingy ahoana no fomba hitadidy bakoka ratsy avy amin'ny tsara? Eto ambany eto aho hanazava izany.
Inona no mahatonga ny fichier malgache?
Mampidira azy amin'ny teny anglisy, ny rohy ratsy indrindra dia ny manimba (raha tsy izany, mandika) ny toro-lalana lehibe indrindra an'ny Google ho an'ny webmasters. Ary misy toetra maromaro vitsy izay mamadika ny rindran-damba ho an'ny tanjona SEO (raha tsy izany, ny lohamilina goavambe). Ny rohy ratsy rehetra dia avy amin'ny iray amin'ireto toerana ireto:
Ny vohikala na blôgy izay efa nahazo sazy voalohany amin'ny sombin-dahatsoratra amin'ny Google - na ny halehiben'izy io dia simba amin'ny algorithm na manodina tanana - Ny fifandraisanao amin'izy ireo dia hahatonga anao hanao toy izany koa.
Loharanom-baovao tsy misy ilana azy, tsy misy ifandraisany amin'ny tranokalanao maintin'ny bilaogy. Raha heverina fa tena manan-danja ny filazana ny valiny, dia tsara kokoa raha tsy manana backlinks mihitsy ianao, fa tsy manala baraka be dia be.
tranokala malahelo na blôgy misy lanjany avo lenta ambany pejy - tsy misy ilàna azy ho an'ny olona tena izy, toy izany koa ny loharanom-baovao tahaka izany mba hahazoana rohy amin'ny.
Tranok'asa avo lenta amin'ny fampiasana lahatsoratra amina doka dika mitovy, ary koa ny tambajotra blôgy - manalavitra azy ireo amin'ny laoniny, raha tsy te-hanasazy sazy haingana avy amin'i Google ianao.
Pejy miresaka momba ny fanitsakitsaham-bady, ny filokana, na ny pharmacie, ary koa ny tsoratadidy sosialy, hacked or malware-spawning ones.
Blaogin'ny lanjany ambany izay mankasitraka ny famoahana vahiny. Mazava ho azy, ny vahiny mamoaka ny tenany dia fomba tsara hahazoana rindran-damina, nefa manana dipoavatra indroa ianao eo amin'ny toerana tokony hizarana ny votoatiny manokana.
Miverena Backlinks mba hialana amin'ireo ratsy indrindra
Rehefa fantatsika hoe inona no mahatonga ny fichier ratsy, fotoana hijerena ny tranokalanao manokana na bilaogy. Araka ny efa nolazaiko, amin'ny fampiasana iray amin'ireo fitaovana an-tserasera ireo dia mety ny fomba tsara indrindra hanaraha-maso ny backlinks. Noho izany, amin'ny fampiasana Open Site Explorer na Semalt Analyzer, dia afaka mandinika haingana ny profil-nao ianao ary manamboatra fandaharam-potoana fanaraha-maso matetika mba hanaraha-maso ny backlink amin'ny fotoana mety. Noho izany, tokony hamaha avy hatrany ny faran'izay ratsy indrindra ianao amin'ny farany, mba hisakanana azy ireo tsy hanisy ratsy anao.
Rehefa vita ny fanadihadin-drakitra haingana dia manasa anao aho hiasa. csv rakitra mba hanivana tsy amin'ny alalan'ireo famantarana fampitandremana (amin'ny lozam-pifamoivoizana mety tsy mety) fa avy amin'ny sata ao amin'ny Google Index. Amin'izany fomba izany, dia hanaisotra avy hatrany ireo ratsy indrindra fantatra amin'ny anarana hoe "domains tsy voatondro. "Aorian'izay, ny zavatra rehetra tokony hataonao dia ny manombana tsara ny rohy mampiahiahy hita avy amin'ny fitaovana fikarohana baklink - ary manapa-kevitra raha tokony hesorina na alamina. Na izany na tsy izany, dia aza misalasala ny handalina ny fanadihadiana lalina momba ny fanaraha-maso ny rindran-damina amin'ny fomba rehetra - izay hanampy anao hahatakatra ny lanjany amin'ny maody Source .